Amabhuloho, izindlu ezingajwayelekile nezinemibala, iphunga le-pizza ne-Aperol, yenza iVenice a indawo oyiphuphayo okwehlukaniswa kwedolobha eYurophu. Usayizi wayo omncane, iminyuziyamu, futhi izinto zizokugcina umatasa isikhathi eside futhi esifushane ngempelasonto. Kukhona i-piazza encane nje ekhoneni kusuka esikhungweni esiphithizelayo, lapho ungahlala khona emuva, ube ne-cappuccino ne-panini, noma ziphathe okumnandi kuphekwe nge-pizza esitofini sasendulo.
Uma unezinyo elimnandi, uzoba neholide lokuphumula idolobha elimangalisayo eBrussels. IBrussels inokuningi ongabelana ngakho nokukubonisa, njengokujabulisa kwayo ushokoledi owaziwa umhlaba wonke nama-waffles. Ngaphezu kwalokho, Ngaphezu kwe 100 iminyuziyamu ikulindile eBrussels. Ngemuva kokuvakashela abahamba phambili ungabhekisa kuDanseart ukuze ulume ukudla ezindaweni zokudlela ezinhle kakhulu. Elinye igugu eBrussels yindawo ebabazekayo iSainte-Catherine kanye ne-chic namasiko eChatelain.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ongayenza eBudapest ukuthatha uhambo ngesikebhe wehle umfula iDanube. Indlela enhle yokubabaza idolobha nezakhiwo zaseBudapest ngesikebhe. Ngemisebenzi emihle yangaphandle nangaphakathi, inhloko-dolobha yaseHungary ifinyelela phezulu phezulu 10 ukuhamba kwamadolobha okuhle kakhulu eYurophu.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi wesitimela ashibhile kakhulu kunoma yimaphi amakhefu amahle wedolobha oya kulo ohlela ukulithatha!
Ngabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Ama-10 City Breaks amahle kakhulu eYurophu” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
citybreak citybreakeurope citybreaks summertraintravel TravelBudapest imvubehamb UkuhambelaPrague